Fanatsarana ny Renivohitra ara-toekarena
Haremina tanteraka ny lalana mirefy 3KM
Natomboka ny talata 20 Mey ny asa fanamboara-dalana eto Toamasina, fanarenana ny lalana Michel Mahazo ao Morafeno izay miainga avy eo amin’ny Pont District na Pont Tanamakoa ka hatreny amin’ny Biraon’y Firaisana Ankirihiry.
Nidina ifotony nijery imaso ny fanombohana ny fanamboaran-dalana ny Minisitrin’ny asa vaventy Atoa Roland RATSIRAKA, lehiben’ny faritra Atsinanana Atoa TALATA Michel sy ireo manampahefana maro eto Toamasina. Tafiditra anaty politikan’ny fitondrana ankehitriny ny asa fanarenana ny lalana rehetra eto amin’ny firenena ka isan’izany ny eto antapotananan’ny Toamasina.
Maro ny ampahan-dalana ho asiam-panamboarana eto amin’ny renivohitra ara-toekarena ka tafiditra amin’izany ireo lalana tena efa simba na ny points noirs, izany mirefy 3 KM izay haremina tanteraka, vola mitentina 4 miliara Ariary avy amin’ny fanjakana Malagasy no ampiasaina amin’izany ka ny orinasa COLAS no hanatanteraka ny asa.
Misy ihany koa fanampenan-davaka ny miainga avy amin’ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy mipaka hatranyTanamakoa.
Misy ny fepetra noraisina mba hampateza ny lalana toy ny tsy fahazahoan’ny Camion mivezivezy amin’ny andro antoandro eto antapotanana.
(47) Erino RAZAFIMANANA : 21-05-2014 - 17:00